Iindaba - Iibheringi zeRoller
Ngokufanayo eyakhiwe njengeebheringi zebhola, iibheringi ezijikelezayo zinonxibelelwano emgceni endaweni yokunxibelelana, ukubonisa amandla amakhulu kunye nokumelana okuphezulu. Ezi ziziqengqeleki ngokwazo ziza ngeendlela ezininzi, ezizezi, ezokubhola, isangqa, i-tapered kunye nenaliti. Iibheringi ze-Cylindrical roller zilawula kuphela imithwalo enqunyelweyo. Iibheringi ze-roller ezijikelezayo zinokulungelelanisa ukungalungelelani ngakumbi kwaye, xa iphindwe kabini, yaphosa kwelicala. Iibheringi ze-Tapered roller zingalawula imithwalo ebalulekileyo yokufaka. Iibheringi zenaliti, eyahlukileyo yeebheringi ze-roller ze-cylindrical, inokusingatha imithwalo ephezulu ye-radial ngobukhulu bayo, kwaye inokwenziwa njengeebheringi zokufaka inaliti.
Iibheringi ezijikelezayo ziyafumaneka njengoyilo lokugcwalisa ngokupheleleyo kunye neebheringi zenaliti phantse ngokungathandabuzekiyo ziya kuba kwesi sitayile. Iibheringi zenaliti zisebenza ngokukodwa ngokubuyisa isenzo, kodwa ukungqubana kuya kuba phezulu ngenxa yokurabha iroli.
Xa usebenzisa i-cylindrical roller iibheringi emigodini enee-angular misalignment, kukhethwa ukuba kusetyenziswe iibheringi ezimbini ezimfutshane zokubuyela umva kunokubamba iroli enye ende.
Ukukhetha iBhola okanye iRoller Bearing
Njengomgaqo oqhelekileyo, iibheringi zebhola zisetyenziswa ngesantya esiphezulu kunye nemithwalo elula kuneebheringi ezijikelezayo. Iibheringi mqengqeleki ukwenza ngcono phantsi ukothuka kunye nempembelelo ukulayishwa.
Iibheringi zebhola zihlala zithengiswa njengeendibano kwaye zithathelwa indawo njengeeyunithi. Iibheringi ezijikelezayo zihlala zigqityiwe kwaye ophethe iroller kunye neeroli, okanye imidyarho engaphandle okanye yangaphakathi, ithathe indawo yomntu ngamnye. Iimoto ezihamba ngasemva zisebenzisa la malungiselelo amavili angaphambili. Uncedo lolu luyilo kukuba imidyarho inokuncitshiswa ilingane emigodini nasezindlwini zokwenza iindibano ezisisigxina ngaphandle kokubeka emngciphekweni wokuziqengqa ngokwazo.
Iibheringi zebhola enye enemigangatho emiselweyo kwaye inokusetyenziswa ngokungafaniyo phakathi kwabavelisi. Iibheringi ezijikelezayo azimiselweyo ngokomgangatho ngoko ke isikhombisi kufuneka sidibane kwikhathalogu yomenzi ukukhetha enye efanelekileyo yesicelo.
Iibheringi ezijikelezayo zenziwa ngenani elithile lokucoca ngaphakathi. Naluphi na ulungelelwaniso olungalunganga olugudla ibhola ngaphandle kwendawo kwaye lususe oku kugqitywa kwangaphakathi akufuneki lube nefuthe kubomi bokuthwala. Iibheringi ezijikelezayo zibuthathaka ngakumbi kukungalungelelani kakuhle. Umzekelo, ibhola ethwele ukuqhuba ngesantya esimodareyithi esinokulingana okungahambelaniyo inokusebenza ngempumelelo ngokungalungelelani kakuhle kwe-angular okuphezulu njenge-0.002 ukuya kwi-0.004 kwi./in. phakathi kokuthwala kunye neshafti. Isithambisi esijikelezayo, xa kuthelekiswa, sinokuba sengxakini ukuba ukungalungelelaniswa kakuhle kudlulile kwi-0.001 kwi ./in. Abavelisi baya kubonelela ngokubanzi ngeendlela ezamkelekileyo zokungalungelelani kakuhle kwee-angular kwiibherethi zabo.